Wararka - Waa maxay Waalka Qufulka Hawada Rotary Nadiifinta Degdega ah ?
Waa maxay Waalka Qufulka Hawada Rotary Nadiifinta Degdega ah?
Iyada oo dhammaatay ku dhawaad ​​20 sano. Ganacsiga ku jirasuuqa gudaha iyo suuqa dibadda labadaba, waxay waa ereyga’s Roodhida dhaq-dhaqaaqa ugu weyn iyo buskudkawaa. Iyada oo in ka badan 15 badeecooyin lagu soo bandhigay suuqa, Shirkaddu waa qayb ka mid ah nolol maalmeedka malaayiin macaamiisha ah.aduunka. Ku faan inaad la xiriirto calaamad weyn ZILI taasi waxay abuurtay saamayn bulsho oo togan.
Warshadaha Roodhida, nadaafaddu waa tan ugu muhimsan waxayna u baahan tahay nadiifinta joogtada ah ee qalabka ku lug leh. Caqabada macmiilkayagu kama duwanayn. Kala goynta joogtada ah ee waalka rotary si meesha looga saaro kadibna loo nadiifiyo waxay ahayd caqabad. Wakhtiga dayactirku wuxuu ahaan jiray ilaa 1.5 saacadood. ilaa 2 saac. Ka-qaybgalka soo noqnoqda iyo kala-goynta tuubada wareeggu waxay keentay nolosha gaaban ee shaabadihii shafka, sidaas darteed, waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo beddelo valve rotary laftiisa.
Valve Nadiifi Degdegga ah oo leh nashqad fayadhowr/nadaafeed ayaa ahaa xalka aan ku bixinay SS 304 oo ah walxo dhismo ah oo lagu dhejinayo hopper-ka hoostiisa.
Alaabooyinka ku jira Warshadaha Roodhida waxay inta badan ku jiraan budo qalalan ama qaab granular ah. Hawsha ugu weyn ee valve qufulka hawada wareegta waa in la joogteeyo xaalad quful wanaagsan, sidaas darteed, la go'doomiyo cadaadiska hoose iyo kor socodka/wareejinta faakuumka.
Nadiifinta degdega ah ee Rotary Valve waxaa loogu talagalay codsiyada xasaasiga u ah wasakhda ama habka u baahan nadiifinta soo noqnoqda. Naqshadeedu waxay si fudud u heli kartaa rotor-ka iyo sagxadaha gudaha ee nadiifinta degdega ah iyada oo aan loo baahnayn in laga saaro valve rotary ee nidaamka.
Furayaasha rotary ee degdega ah ee nadiifka ah ayaa loo isticmaalaa si loo dhimo wakhtiga hoos u dhaca si loo nadiifiyo waalka, taas oo u oggolaanaysa ka saarida rotorka iyada oo aan la saarin qanjidhada baakadaha. Kala-soocidda iyo dib-u-ururinta ayaa la samayn karaa iyada oo aan loo baahnayn qalab kasta. Intaa waxaa dheer, habka nadiifinta ee waalka waxay wanaajisaa nolosha shaabadaha shafka.
valve rotary, hawo xidhid, 3-Way weeciye Valve, Xakamaynta Elektarooniga ah, quudiyaha rotary, 3 Way Ball Valve,